PVC အထည်အလိပ်ပြည်ထဲရေး roller ရှပ် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:PVC ကြိတ်စက် Shutter,ပြည်ထဲရေးကြိတ်စက် Shutter,အထည်အလိပ်ကြိတ်စက် Shutter
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > PVC အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး > PVC အထည်အလိပ်ပြည်ထဲရေး roller ရှပ်
PVC အထည်အလိပ်ပြည်ထဲရေး roller ရှပ်
PVC အထည်အလိပ်ပြည်ထဲရေး roller ရှပ်တာတံခါး PVC နှင့် 201 # / 304 # သံမဏိနှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Radar အာရုံခံကိရိယာ & Loop sensor ကိုခြုံခလုတ်, လက်ချောင်း prite နှင့်အခြား command ကိုစနစ်ဖြင့်ဒါဟာဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
မြန်နှုန်းမြင့်တလိမ့်တုံးရှပ်တာတံခါးများသို့မှသာအပေါ် Logistic ဂိုဒေါင်, cleanroom, စက်ရုံများနှင့်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1. ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များကို ဂျပန်မစ်ဆူဘီရှီအင်ဗာ, PLC, servo ထိန်းချုပ်မှု systerm နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို။
2. Dynamic စနစ်များ အထူးမြန်နှုန်းမြင့်မော်တော်လျှော့ချချမှတ်, 0.75-2.2KW, မော်ဒယ်ရွေးဖို့တံခါးကို၏အရွယ်အစားအရသိရသည်။ ရှေးခယျြမှု, SNMA သို့မဟုတ်ချုပ်နှစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်။
3. တံခါးဆောက်လုပ်ရေး --Doorframe ရှန်ဟိုင်း Baosteel ၏အအေး-လိပ်သံမဏိစာရွက်များ, 2mm အထူ, အမြင့်ဆုံးအပူချိန်နှင့်ငြိမ်-အခမဲ့, အရောင်ရွေးချယ်နိုင်၏အခြေအနေများအောက်တွင်ဆေးသုတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ --Curtain ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးများအတွက် High-density ကိုစက်မှုထည်အပေါ်ယံပိုင်း, 0.8mm အထူ, အဝါ, အပြာ, အနီ, အဖြူ, လိမ္မော်ရောင်နှင့်အခြားအရောင်ချမှတ်။ --Transparent ဝင်းဒိုးကိုသင့်ရဲ့အမိန့်အရသိရသည်ဂျပန်ကနေတင်သွင်းပွင့်လင်း pve ရုပ်ရှင်, အရွယ်အစားနှင့်တည်နေရာကိုအသုံးပြုပါ။
4. ပွင့်လင်းလမ်း ကြိုး / လက်စွဲစာအုပ်ဆွဲ radar / မြေကြီးတပြင် induction / အဝေးထိန်း / ။
5. သက်ဆိုင်သောဒေသများ လေဆိပ်, စက်မှုလုပ်ငန်း, carwash, ဆေးဝါး & ဓာတုဗေဒ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, မော်တော်ကား, အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်း, ဖြန့်ဖြူး, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, အအေးစတိုးဆိုင်များ & ရေခဲသေတ္တာ
တံခါးဖွင့် PVC ကုလားကာအလိုအလျောက် Rapid Rolling အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုအလိုအလျောက် PVC အထည်အလိပ် Rapid ကြိတ်စက်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုအထက်တန်းမြန်နှုန်း PVC အထည်အလိပ် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC ကုလားကာမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rolling-up, တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက် PVC ကုလားကာကြိတ်စက်ရှပ်တာတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အတွင်းပိုင်းအလိုအလျောက်မော်တာမြန်နှုန်းမြင့် PVC လှိမ့်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အတွင်းပိုင်းမြန်နှုန်းမြင့် PVC Hot-Door တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အတွင်းပိုင်းမြန်နှုန်းမြင့် PVC တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC ကြိတ်စက် Shutter ပြည်ထဲရေးကြိတ်စက် Shutter အထည်အလိပ်ကြိတ်စက် Shutter Rapid PVC ကြိတ်စက် Shutter Turo ကြိတ်စက် Shutter quick ကြိတ်စက် Shutter PVC Indutrial ကြိတ်စက် Shutter overhead ကြိတ်စက် Shutter